Netizen Report: Nahitana Fanakatonana Aterineto in-31 i India Tamin’ny Taona 2016. Firy ny Fanakatonana Tao Amin’ny Firenenao? · Global Voices teny Malagasy
Ny vokatry ny fanakatonana aterineto ao India, Shina sy ny sisa.
Voadika ny 24 Avrily 2017 15:01 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, বাংলা, Nederlands, Français, Español, English
Foiben'ny tahiry Microsoft Bing. Sary avy amin'i Robert Scoble tao amin'ny Flickr (CC BY 2.0)
Manome topi-maso iraisampirenena momba ny fanamby, fandresena, sy vaovao malaza momba ny zo an'aterineto manerana izao tontolo izao ny Netizen Report an'ny Global Voices Advocacy.
Nanomboka tamin'ny 1 Janoary 2017, nisy fanakatonana aterineto fito teo anivon'ireo faritra ao India. Tamin'ny taona 2016, 31 ny isan'ny fanakatonana tahaka izany. Miaraka amin'ny fitomboan'ny isan'ny firenena manerantany, hita fa lasa paikady mahazatra hatrany ho an'ny manampahefana ao an-toerana sy any amin'ny faritra ny fanakatonana aterineto rehefa miatrika fahatezeram-bahoaka manodidina ny politika sy ny fifidianana, ny ady ara-poko sy ara-pivavahana, ary ny loza ateraky ny herisetra.
Namoaka sarintany ifarimbonana antserasera ny Foiben'ny Lalànan'ny Fahalalahan'ny Rindrambaiko (Software Freedom Law Centre) ao New Delhi tamin'ny volana lasa, izay mampiseho ny toerana sy ny antsipirian'ny fanakatonana aterineto tsirairay tao India, miaraka amin'ny famaritana fohy momba ireo hetsi-bahoaka nifanojo tamin'ny fanakatonana.
Tamin'ny lahatsoratra bilaogy vao haingana iray, nilaza ny talen'ny Foibe, Mishi Chaudhary fa ilain’ ny fitondran'i Modi ny mampifandray ny fianteherany amin'ny fanakatonana aterineto ho fomba hifehezana ny lahateny sy ny zavatra ataon'ny vahoaka, amin'ny fitomboan'ny fiankinan-dohany amin'ny teknolojiam-pifandraisana an-tambajotra ho an'ny servisin'ny governemanta, ny fahasalam-bahoaka, ny vola sy ny sisa, ary ireo rehetra ireo dia ao anatin'ny fanentanana “India Nomerika” an'ny fitondrana. “Raha tiantsika ny hanana ny fampanantenan'ny fanomezan-tanjaka amin'ny alalan'ny India Nomerika”, hoy izy nanoratra, dia “tsy tokony ho lasa “nôrmaly” vaovao ny fanakatonana “.
Ny fanjakan'i Jammu sy Kashmir no tena voakasiky ny paikady indrindra hatramin'izao, niaina fanakatonana folo nandritra ny taona 2016 monja, ary dimy isan-taona nanomboka tamin'ny taona 2014. Tsy irery i Jammu sy Kashmir ao anatin'izany fanakatonana tambajotra eny amin'ny faritra izany, ny fanjakana sy faritany matetika atao anjorom-bala ka mahazatra loatra ao amin'ny faritra sasany manerana izao tontolo izao ny adilahy ara-politika sy ny fifanenjanana ara-poko ka tsy atao vaovao intsony ny fanakatonana aterineto.
Ao Tibet sy Xinjiang, faritra roa anjakan'ny vitsy an'isa ara-poko ao Shina Andrefana, valibontana mahazatra amin'ny fitroaram-bahoaka sy amin'ny fety tahaka ny Taombaovao Tibetana mihitsy aza ny fanakatonana, ary mety haharitra herinandro na amam-bolana mihitsy aza. Tao amin'ny saikanosin'i Sinay ao Ejypta, ny fanakatonana mandritra ny ora maromaro dia miseho matetika mandritra ny fifandonan'ny miaramila amin'ireo vondrona mpikomy mahery setra ao avaratra, akaikin'i Israely sy ny tetezantanin'i Gaza ao Palestina hatramin'ny taona 2013
Tamin'ny taona 2016, nanombatombana ny Ivontoerana Brookings fa ny fanakatonana aterineto dia niteraka fatiantoka 2,4 miliara dolara manerantany, mifototra amin'ny fitambaran'ny harin-karena faobe (PNB) sy ny faharetan'ny fanakatonana. Miaraka amin'izany, ny fahavoazana ateraky ny fanakatonana eo amin'ny olom-pirenena, dia tsy afaka mifandray, tsy mahazo vaovao sy tolotra ara-panjakana izy ireo, ary mahatonga ny fifanakalozana ara-bola (ankoatra ny maro hafa) ho tsy hay refesina.
Nanamafy ny sazy ho faty ho an'ilay tanora 21 taona ny mpitsara Iraniana
Tovolahy Iraniana iray no miatrika sazy ho faty noho ny hafatra ho an'ny vahoaka nalefany tamin'ny sehatra fandefasan-kafatra LINE izay voalaza fa manohitra ny Islamo sy ny Korany. Nosamborina tamin'ny taona 2015 noho ny hafatra nalefany i Sina Deghan teo amin'ny faha-19 taonany, ary nohamafisin'ny Fitsarana Tampony tamin'ny faramparan'ny volana Janoary tamin'ity taona ity ny saziny.
Voasambotra noho ny tsanganana Instagram iray ny bilaogera Nizeriana iray
Voasambotra tamin'ny 13 Martsa ilay mpanao gazety sady bilaogera Nizeriana Kemi Olunloyo noho ny famoahana taratasy mikasika ny raharaha fanitsakitsaham-bady mahakasika pasitera iray sy mpikambana iray tao amin'ny fiangonany tao amin'ny Instagram. Nosamborina ihany koa ny mpamoaka ny lahatsoratrany, Samuel Walson ary voampanga amin'ny fanalam-baraka sy “famoahana vaovao diso.”
Miatrika tsikera noho ny fitaterana fisian'ny fandrahonana fanolanana antserasera ireo mpikatroka Paragoaiana
Rehefa nisy nandrahona fanolanana antserasera, izay nolazain'ny mpanafika azy fa ezaka “hanitsiana ny fironany ara-nofo” ny mpanao gazety Paragoaiana iray, dia namoaka lahatsoratra milaza ny fanorisorenana azy sy ny olana momba ny herisetra ara-nofo antserasera ny TEDIC fikambanana mpiaro ny zo nomerika Paragoaiana iray. Nanjary mampiadihevitra ny lahatsoratra nanomboka tamin'izany noho ny disadisa momba ny tokony hanoherana ny fanorisorenana sy hiarovana ny fiainana an-takonana rehefa avy nampiditra ny raharaha tany amin'ny fitsarana, mitaky ny hamafàna ny lahatsoratra ny olona voatonona anarana tamin'ny lahatsoratra. Araka ny filazan'ny TEDIC, “mikasa hanampim-bava ny fitakiana ara-drariny, hametra ny adihevi-bahoaka amin'ny alalan'ny sivana sy manakana ny vehivavy tsy hanao fiampangana vaovao” ny fitakiana”.
Miaritra fanafihana antserasera ny media tsy miankina sy ny tranonkalan'ny ONG Venezoeliana
Herinandro maro taorian'ny fandroahana am-pahanginana ny CNN tao amin'ny fantson-tambajotra fahitalavitra Venezoeliana, fampahalalam-baovao tsy miankina sy tranonkalan'ny fiarahamonim-pirenena maromaro no niharan'ny fanafihana ara-teknika izay nahatonga azy ireo ho tsy nisy aterineto nandritra ny ora maromaro, na misy mihitsy aza mandritra ny andro maromaro. Anisan'reo tranonkalam-baovao voakasika ny Provea sy Caraota Digital.
Afaka mampiasa fanarahamaso faobe mba hanasaziana “fanomanana” heloka bevava i Japana
Handinika volavolan-dalàna iadiana amin'ny tetidratsy ireo mpanao lalàna Japoney atsy ho atsy, ka ao anatin'izany ny lalàna mampiadihevitra ahitana ireo lalàna fitsinjovana. Ahitana karazana heloka bevava rehetra (277 ny fitambarany) ny volavolan-dalàna ary manasazy ny “fanomanana” heloka bevava ho avy rehefa tontosain'olona roa na mihoatra izany, ka nahazo famatsiam-bola na fitaovana hanaovana heloka bevava ny iray amin'izy ireo fara fahafahakeliny, na manaramaso izay mety ho toerana hanaovana izany. Nilaza tamin'ny fanambarana ho an'ny vahoaka tamin'ny volana Janoary i Motoji Kobayashi, filohan'ny Fikambanana Tokyo Bar, fa : “Manitsakitsaka ny fitsipika fototra ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana sy ny rafitra ara-dalàna ao amin'ny firenentsika ny volavolan-dalànan'ny fikonokononana tetidratsy. Mandrahona ny asam-piarovana ny zon'olombelona izany.”
Mananika ny Rindrin'Afo Lehibe an'i Shina ny ‘mpijirika vaovao’ —ary manaparitaka vaovao faikany
Miasa mandika teny sy manangona votoaty avy amin'ireo tranonkala avy any ivelany voaràra hovakian'ireo Shinoa miampita ny Rindrin'Afo Lehibe ireo mpijirika vaovao ao Shina. Nanao antsafa ireo mpamoaka vaovao an-tsokosoko maromaro ny Initium seha-baovao fanadihadiana manontany azy ireo momba ny fomba hanodinan'izy ireo ny fitaovana mba ahafahana miditra amin'ny vaovao ao amin'ny tranonkala voasakana tahaka ny Buzzfeed sy Reddit ary manoratra izany indray amin'ny teny Shinoa. Manome tombombarotra goavana ireo tranonkala, hoy ny Initium, saingy mitady hanao laharam-pahamehana ny tahan'ny tendry (click) manoloana ny asa fanaovan-gazety mahaliana ny vahoaka.
Nanao Veloma ny Vondrona Eoropeana—sy ny fampiharana fanafenan-tsoratra ihany koa ny Britanika?
Nilaza ny Sekreteram-panjakana ao amin'ny Fanjakana Mitambatra, Amber Rudd, fa mikasa hametraka “backdoor” ho amin'ny fanafenan-tsoratra ny fanjakana Britanika. Nitranga izany taorian'ny famoahana porofo fa nifandray tamin'ny WhatsApp ilay mpanafika an'i Westminster talohan'ny fanafihana. Naneho ny ahiahiny ireo mpanao politika Britanika sy vondrona miaro ny fahafahana sivily fa sady tsy nifanaraka no tsy mahomby ho valim-panafihana ny fitakiana..
Politikan'ny aterineto Taorian'i Snowden – Vaovaon'ny Media sy ny Fifandraisana, olana manokana momba ny politika taorian'ny fanambaran'i Snowden
Ny Toetoetry ny Sivana Aterineto ao Myanmar - Open Observatory of Network Interference
Misorata anarana ato amin'ny Netizen Report amin'ny alalan'ny mailaka
Mahsa Alimardani, Ellery Roberts Biddle, Nevin Thompson, Laura Vidal ary Sarah Myers West no niara nanoratra ity lahatsoratra ity.